စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 25/03/2020)
ဒါဟာတာရှည်မီးရထားခရီးစဉ်အတွင်းပင်ပန်းခြင်းနှင့်နှေးကွေးခံစားရရန်လွယ်ကူသည်. နာရီရထားပေါ်မှာထိုင်ပြီးနောက်, လာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ခြေထောက်ဆန့်ရန်အရေးကြီးပါသည်က. အဆိုပါစစ်သုံးအိုးခွက်မှတစ်ဦးကရေတိုလမ်းလျှောက်အချိန်ကိုသုံးစွဲဖို့သင်ကူညီမည်ဖြစ်ပြီးအားသွင်းခံစားရရန်. ယင်းဖို့ရထားမှတဆင့် Walk စစ်သုံးအိုးခွက်, ယင်းကိုကြည့် ရှုခင်း နှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖျော်ယမကာနှင့်အတူအချို့သောအချိုပွဲပျော်မွေ့
မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြမယ့်နိုင်ပါတယ် လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ. လူသစ်တွေ့ဆုံ ရထားပေါ်တွင်၏အခြား Modes သာထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါသည် တင်ဆောင်. လေယာဉ်မတူဘဲ, သင်သည်အခြားခရီးသွားများနှင့်အတူန်းကျင်ရွှေ့နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လွတ်လပ်မှုကိုရှိ. သငျသညျအခြားလူများနှင့်၎င်းတို့၏ပုံပြင်များထဲကနေဘာတွေသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် – ဘဝအကြောင်းပြောဆို, သင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုအလုပ်နှင့်ကြီးထွား. Ask the person next to you about the book their reading, ယင်းအကြောင်းစကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်သူတို့ကိုရိုးရိုးမွှေးသို့မဟုတ်ပူဇော် ခရီးလမ်းဆုံး သူတို့မှခရီးသွားလာနေ. ဒါဟာသင်စဉ်များပြောဆိုမှုများဖြတ်သန်းနေသည် ရထားဥရောပခရီးသွားလာ ကြောင်းတည်မြဲအမှတ်တရများဖန်တီး.
အဆိုပါရှည်လျားသောမီးရထားခရီးသည်သင်၏ကာလအတွင်းတခါတရံအေးဆေး၏တစ်ခုတည်းသောကာလများမှာ ခရီးစဉ်. ဒါဟာသင်ဆီထည့်ဖို့အတှကျစိတ်ကူးအခွင့်အလမ်းဖြစ်နှင့်သင့်ကိုရှေးခယျြလိုရာခရီးအဘို့အပွငျဆငျနိုငျ. သောက် ရေများများ, အခြို့သောအစာကိုစားခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်, အိပ်. သင့်ရဲ့ရှည်လျားမီးရထားခရီးကိုသုံးပြီးအမြော်အမြင်ရှိရှိသင်လန်းဆန်းနှင့်သရုပ်ြပခံစားရရန်ကူညီပေးပါမည် - သင်၏နောက် destination သည်များအတွက်အဆင်သင့်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)